Tonga ny iPad Pro vaovao misy fampiasa "Pro" tena marina | Vaovao IPhone
Tonga ny iPad Pro vaovao misy ny fampiasa "Pro" tena miavaka
Apple dia nanohy ny fampisehoana finday tamin'ny hetsika lohataona androany tolakandro ary, araka ny nantenainay, nanana vaovao izahay ny faritra iPad izay, ankehitriny, dia miaina hatramin'ny anarany "Pro" miaraka amin'ny endri-javatra tsy mitovy. Raha nanana fanontaniana momba ny fividianana ity fitaovana ity ianao dia azo antoka fa manampy anao hanapa-kevitra (sy ho amin'ny tsara kokoa) ireo vaovao rehetra ireo. Mijanona fa holazainay aminao ny zavatra rehetra.
Ny iPad Pro vaovao dia nanjary mahery vaika sy manintona indrindra, ary misaotra izany rehetra izany Apple dia nampiditra ny processeur M1 izay efa nitafy ny laharana MacBook sy iMac koa. Amin'izany fomba izany dia mihabetsaka ny hery sy ny fahafahan'ny iPad Pro, ary mampiditra a 8-Core CPU 50% haingana kokoa noho ny maodely Pro teo aloha ary koa manatsara ny herin'ny sary 40% miaraka amin'ny GPU 8-Core. Araka ny mety ampoizinao, ny M1 dia manatsara ny fahombiazan'ny fitaovana, izay hitazona azy fizakantenan'ny tontolo andro tsy misy olana.
1 Fampirimana vaovao sy fifandraisana
2 Fakan-tsary vaovao, efijery vaovao
Fampirimana vaovao sy fifandraisana
Etsy ankilany, ho antsika izay manana fitehirizana fohy eo an-toerana na dia amin'ny fampiasana iCloud aza, Apple dia nanolotra kinova vaovao miaraka amin'ny fitehirizana hatramin'ny 2TB miaraka amin'ny hafainganam-pandeha 2x. Tsy isalasalana fa fanapahan-kevitra tena nankasitrahan'ny mpampiasa rehetra izay manana iPad Pro ho fitaovana fanovana horonantsary ary tsy maintsy mitahiry rakitra marobe ao an-toerana handaminana azy.
Saingy vao nanomboka ny vaovao, ary izany dia manana seranan-tsambo vaovao ao amin'ny iPad Pro ihany koa izahay hampifandray ireo kojakojantsika. Apple dia mampiditra seranana ThunderBolt miaraka amin'ny bandwidth hatramin'ny 4x fanampiny. Io dia ahafahana mitahiry haingana kokoa ao anaty kapila ivelany ary miaraka amin'ny fifandrindrana amin'ny fifandraisana amin'ireo kojakoja ivelany misy ny famahana 6K. Tsy nahita hevitra vitsivitsy avy tamin'i Apple izahay momba ny mety hanitarana ny efijery amin'ny mpanara-maso ivelany, fa manantena foana izahay fa ho ampiasain'ny fanavaozana iPad OS izay voalaza ho fiara fitomboana amin'ny fampiasa iPad. Ho fantatsika tsy ho ela.
Manohy amin'ny vaovao sy miresaka momba ny hafainganana, Apple dia nanampy fifandraisana 5G amin'ny iPad, manome azy io ho fitaovana tena mahomby sy mailaka hahafahana mandefa vaovao isan-karazany haingana avy any amin'izay toerana rehetra. Toa i Apple dia miloka amin'ny "fivezivezena" ho avy ho an'ny fitaovany amin'ny alàlan'ny fanomezana azy ity haitao ity.
Fakan-tsary vaovao, efijery vaovao
Etsy ankilany, ny toe-javatra mahatsiravina dia toa nisy fiatraikany tamin'i Apple sy ny fivoarany ary izany dia nahatonga azy ireo hanatsara ny fakantsary voalohany an'ny iPad. Fitaovana fakan-tsary 12MP ultra-wide vaovao, manambatra teknolojia vaovao nantsoin'izy ireo hoe Central Stage. Amin'ny alàlan'ity teknolojia ity, manao antso an-tsary (ary mampifandray izany amin'ny toe-javatra iainantsika sy ny fomba nanamaroany ireo antso an-tsary), hahita anao ny fakan-tsary ary hiezaka hifantoka amin'ny efijery na dia tsy mihetsika aza ilay fitaovana. Vita izany noho ny zorony malalaka ary hahafahanao mamantatra olona maro hahita ny fitifirana mety indrindra.
Farany ary tsy farany, Ny iPad Pro dia hanana efijery mini-LED vaovao nantsoin'i Apple hoe Liquid Retina XDR hatramin'ny 1000 nits ny heriny ary 1600 tendrony nitsika izay misy 1.000.000: 1 mifanohitra. Efa nanantena izahay fa hampiharina amin'ny iPad ity haitao ity ary, avy amin'izany, hananantsika mainty mainty sy hakingany bebe kokoa amin'ny fanjifana ilay fitaovana koa.
Hanana ireo maodely roa namboarina iPad Pro izahay hatramin'ny 30 aprily, rehefa afaka mitahiry izany isika. Hanana a Vidiny fanombohana ho an'ny maodely 128GB an'ny € 879 ho an'ny maodely 11-inch ary 1.119 € ho an'ny maodely 12,9 miaraka amin'ny fiakarana € 170 amin'ny maodely 5G. Amin'izany fomba izany, ny maodely 2TB dia hahatratra ny vidin'ny € 2.089 ho an'ny 11 santimetatra ary € 2.409 ho an'ny 12.9. Ny daty hanombohana ny famandrihana voalohany dia oscillate ao amin'ny tapany faharoa amin'ny volana Mey.
Azo antoka fa maro, taorian'ny fahitana ny dingana lehibe noraisiny raha oharina amin'ny maodely Pro teo aloha, dia mamporisika anao hividy azy. Raha mbola kojakoja toa ny Magic KeyBoard sy Apple Pencil dia mbola tsy nohavaozina ary mbola mifanentana ihany izy ireo, ataon'izy ireo ho safidy mividy tsara ity iPad Pro ity. Ary ianao? Hividy iPad Pro vaovao ve ianao? lazao anay amin'ny hevitra.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPad » iPad Pro » Tonga ny iPad Pro vaovao misy ny fampiasa "Pro" tena miavaka